Suuqa Biopesticides wuu koraan - PotatoSystem
Suuqa biopesticides ayaa kori doona
Mar 08, 11:18 am
Kooxda Agrochemical-ka ayaa si isa soo taraysa u xiiseeya horumarinta iyo soosaarka badeecooyinka bayoolojiga ah si ay u ilaaliyaan dalagyada muhiimka ah, laakiin warshadee ayaa noqonaysa kan ugu horreeya ee bixiya alaabada ceyriinka tartameysa?
Kiimikooyinka cayayaanka Kiimikada loo aqoonsaday inay qayb muhiim ka yihiin warshadaha cuntada adduunka muddo tobanaan sano ah.
Tan iyo markii la keenay Monsanto 1970-meeyadii, wakiilo ka ilaaliya dhirta oo ku saleysan glyphosate ayaa gacan ka gaystay kordhinta iyo sugidda sahayda cuntada ee adduunka.
Kiimikadan waxay noqotay mid lama huraan u ah warshadaha wax soo saarka beeraha taas oo ay isku mar ka saaritaankii nidaamka beeraha ee casriga ahi ay yeelan karto halista gaajo. Si kastaba ha noqotee, ku adkaysiga dadweynaha ee xun ee isticmaalka 'glyphosate', oo sii huriyay dhaqdhaqaaqayaasha dabiiciga ah (waxay ku eedeeyaan glyphosate dhacdooyinka suurtagalka ah ee oncology ee bini'aadamka), waa aalad awood badan oo loogu talagalay cadaadiska masuuliyiinta sharciyeynta si loo helo waxyaabo kale oo badbaado leh oo laga mamnuuco glyphosate.
Falanqeeyayaasha ayaa rumeysan in horumarka sidan oo kale ah - ka bixitaanka glyphosate suuqyada - ay tahay wax dhab ah.
Faransiiska iyo Jarmalka ayaa qorsheynaya inay mamnuucaan isticmaalka 'glyphosate' marka la gaaro 2021 iyo 2023, halka dalal kale ay u badan tahay inay dhowaan raacaan sharciga. Marka la eego xaqiiqada ah in waxbadan oo beddelaad ah ay ku jiraan horumarin isla markaana ay ku jiraan marxaladda tijaabada, mamnuucyada ballaaran ee ku saabsan sunta adduunka ee sida aadka ah loo adeegsado waxay “dhinac u noqon doontaa,” khubaradu waxay ka digayaan.
Waxaa weli jira rajo ah kuwa shirkadaha beero-kiimikada ah ee aad u weyn oo leh shaqaale cilmiyaysan iyo dhaqaalahooda si dhaqso leh ugu fidiya beeraleyda si dhab ah badbaado u leh alaabada dhirta dabiiciga ah ee ilaalinaysa tayada joogtada ah. Dhab ahaantii waxaa jira faa'iidooyin loogu talagalay soo-saareyaasha dilaaga ah.
Suuqa hadda loo yaqaan 'biopesticides' waxaa lagu qiimeeyaa $ 3,6 bilyan, waxaana la filayaa inuu kor u kaco $ 2025 bilyan marka la gaaro 10,2. Intaa waxaa dheer, sida ay khubaradu sheegeen, tartanka alaabada noolaha leh agrochemicals waxaa suurta gal ah in la bixiyo inay lahaan doonaan saamayno la mid ah kuwa soosaarka caadiga ah. Haddii wax soosaarka dabiiciga ah ee beeruhu ay yar yar yihiin, beeralleydu waxay diyaar u yihiin inay qayb ka mid ah dalagga ku xardhaan magaca fikradda ah helitaanka dalagyada dabiiciga ah, ka dib marka loo eego cabirka dalagga ballaaran, beeralleyda ayay u badan tahay inaysan aqbalin mas'uuliyadda khasaaraha goosashada ka dhashay cudurro ama cayayaanka.
Shirkadda Agrochemical Syngenta ayaa dhowaan shaacisay inay si firfircoon u baarayso sunta cayayaanka dabiiciga ah si ay u buuxiso farqiga u dhexeeya baahida suuqa. Si kastaba ha noqotee, shirkadda ma aysan shaacin taariikhda saxda ah ee la sii daayay.
Bayer waxay soo saartey dilitaankeedii ugu horreeyay noolaha Serenade ee Shiinaha. Sababo la xiriira symbiosis oo ku saabsan hareeraha xididada, sheygan ayaa awood u leh inuu abuuro caqabad ilaalin ah oo ku wareegsan xididka dhirta. Ka caawinta dhirta inay ka nuugto nafaqada waxtarka leh ee ciidda, waxay sidoo kale u oggolaaneysaa nidaamka xididka inuu si xoog leh ugu koro oo uu xoojiyo difaacidda dhirta, taas oo yareynaysa halista cudurka. Serenade-ka wuxuu ka kooban yahay QST713, microorganism microorganism-ka kaas oo ah gram-positive, bakteeriyada u ekaanta-qaabeeya kaasoo ku baahsan deegaanno kala duwan. Sheyga 'microorganism' wuxuu ku caanbaxaa iska caabin adag, oo ku fidsan dusha ciidda iyo dhir. Isla mar ahaantaana, noocyada loo yaqaan 'endophyte' noocyada sunta ah ma aha sun iyo waxyeello la'aan u leh dadka, xoolaha iyo deegaanka.
Maaddaama ay tahay shey ceyriin ah oo loo ballanqaaday soo-saarka biopesticides, waxyaabaha ka soo baxa iniin khardal le'eg ayaa badanaa la tixgeliyaa. Saynisyahannadu waxay xusayaan in kuwani yihiin dawooyinka si fiican loo bartay loona helay natiijooyin wax ku ool ah oo laga soo qaaday isticmaalka khudradda, khudradda miraha iyo dhirta tubaakada. Markaa, waa suurtagal in wakiilada ilaalinta iniin khardal lehi ay noqon karaan kan ugu horreeya ee la tartama biopesticides (Iyada oo lagu salaynayo maqaal uu qoray Colin Blecki, COO at MustGrow Biologics Corp, Canada).
Tags: biopesticidesdaroogooyin cusub oo ku saabsan suuqa waxyaabaha ka ilaaliya dhirtaDiidmada glyphosate
Muuqaalka aragtida: dhammaan waxyaabaha “dabiiciga” ah ma wada yihiin kuwo caafimaad qaba
Maxay faa'iido ugu leedahay beeraleyda guri-joogga ah inay ku quudiyaan dadka reer Yurub iyo Mareykanka waxyaabaha soosaarka dabiiciga ah
Soo-saareyaasha baakadaha ayaa doonaya inay ku qasbaan 100% alaabadooda in la warshadeeyo
Waqtiga isbedelka. Xeerarka cusub ee sunta cayayaanka ma loo baahan yahay?